Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » I-UNWTO iValela uShicilelo oluBalulekileyo kwiMarike yokuHamba yeHlabathi
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • LGBTQ • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba zase-USA ezaphulayo • I-WTN
Ushicilelo lwasimahla lubalulekile kuluntu lwedemokhrasi. Ifuna kwaye isasaze iindaba, ulwazi, izimvo, amagqabaza kunye nezimvo, kwaye yenza abo banegunya baphendule. Ushicilelo lubonelela ngeqonga lokuphindaphindeka kwamazwi ukuba aviwe. Kwinqanaba lesizwe, lengingqi, kunye nelengingqi, ngumlindi woluntu, itshantliziyo, kunye nomgcini kunye nomfundisi-ntsapho, ukonwabisa, kunye nombhali weziganeko zangoku. Kubonakala ukuba oozwilakhe bayamoyika umlindi onjalo woluntu, kwaye kunjalo nguNobhala Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili.
I-UNWTO yi-arhente enxulumene neZizwe eziManyeneyo ephantsi komthetho wamazwe ngamazwe.
Okwangoku, i-UNWTO inoNobhala Jikelele ongekho mthethweni oqhuba umbutho njengozwilakhe. Ngokutsho kokutolikwa kwezomthetho ngummeli obandakanyekayo ekudaleni imigaqo-nkqubo ye-UNWTO, uSG Zurab Pololikashvilihe wabekwa kuphela ngokukhohlisa. Unyulo lokuqala kwi-2018 akufanele luqatshelwe.
UNobhala-Jikelele wakwazi ukuphepha yonke imibuzo ebalulekileyo yeendaba ukususela ekubeni wathatha i-helm ngoJanuwari 1, 2018. Namhlanje yayingumzekelo wendlela i-UNWTO eya kuhamba ngayo ukuvala nabani na ongavumelani noNobhala Jikelele.
Indibano yokuqala yabaphathiswa kwiMarike yokuHamba yeHlabathi ukusukela oko ubhubhane, yenzeka namhlanje eLondon kwiWTM World Stage kwiziko leMiboniso le-Excel.
Njengamaxesha onke, abaphathiswa bebedibana ukuze baxoxe ngemiba efanelekileyo kwiWorld Tourism Organisation kunye nemeko yeshishini. Njengoko kwakunjalo ukususela oko kwasekwa i-UNWTO njenge-arhente ye-UN, iintatheli zaziyinxalenye yabaphulaphuli, kodwa zazingenako ukubuza imibuzo. Emva kwengxubusho yabalungiseleli, kwakuyinto eqhelekileyo ukuba nenkomfa noonondaba.
Konke oku kwatshintsha ngoJanuwari 1, 2018, xa uZurab Pololikashvili waba ophethe ukhenketho lwehlabathi.
Iinkomfa zoonondaba kwimiboniso emikhulu yorhwebo okanye iitafile ezijikelezayo zabaphathiswa azizange ziqhubeke. I-Zurab ibonakala kuphela kwii-ops zefoto kwaye iyanyamalala.
Ngexesha lonke lentlekele ye-COVID-19, uNobhala Jikelele we-UNWTO uthintele onke amaphephandaba abalulekileyo. Namhlanje eLondon, uNobhala Jikelele uye wahamba phambili.
Ukunqanda nayiphi na impendulo okanye imibuzo egxekayo, wazibhala ngabom iintatheli ezibhalela upapasho olunje, eTurboNews.
Isizathu: eTurboNews ibibaluleke kakhulu kuNobhala Jikelele.
Ukuphepha imbono engalunganga kubaluleke ngakumbi namhlanje, ekubeni uZurab Pololikashvili ulungele ixesha lesibini, kwaye ukunyulwa kwakhe kwakhona kufuneka kuqinisekiswe yiNdibano Jikelele eMadrid.
Ukuphumelela isincomo sexesha lesibini liBhunga eliLawulayo ngoJanuwari ngenxa yokuphathwa kakubi, ekwazile ukutshintsha indawo yeNdibano Jikelele eMadrid, kunika ithuba elicacileyo lokuba iZurab iphinde iqinisekiswe okwesibini njenge-UNWTO Sercterary General. ekupheleni kwale nyanga. Imibuzo ebalulekileyo ayimlungelanga.
Intlanganiso yanamhlanje yabaphathiswa e-WTM eLondon yayiyenye yezinto awayezizimasa okokuqala ukusukela oko i-COVID. Kwakufuneka abukeke elungile kwiiveki ngaphambi kokumanyelwa kwakhe kokuqinisekiswa, kodwa akazange akwazi ukujongana namajelo eendaba.
Obekekileyo. U-Najib Balala, unobhala wezoKhenketho eKenya, waliwe yi-UNWTO kwiveki ephelileyo emva kokuba ememe iNdibano Jikelele ukuba ibanjelwe eKenya endaweni yaseMadrid.
UMphathiswa uBalala ebeseLondon namhlanje ukuya kuzimasa intlanganiso yabaphathiswa. Waxelelwa ukuba akusekho zihlalo ziseleyo zabaphathiswa. Ushiye umcimbi emva kwemizuzu engenile, exela eTurboNews umvakalisi, uJurgen Steinmetz, owayelinde kumnyango wokuphuma.
Zonke iintatheli ebezizimase iWTM bezihleli kulo msitho, ngaphandle eTurboNews imelwe nguJurgen Steinmetz. Wenziwa i persona non grata, engavunyelwanga ukuba angene encotsheni.
eTurboNews liqabane leendaba elisemthethweni leMarike yokuHamba yeHlabathi, kodwa oku akwenzanga mahluko. eTurboNews wagrogriswa ligosa leZizwe Ezimanyeneyo xa wayethatha ividiyo yesi siganeko.
I-UNWTO ibonakala iphumelela ekuphepheni ukugxekwa ngamajelo eendaba aphambili.
Ngokomzekelo, i-CNN liqabane leendaba elisemthethweni elifumana izigidi zeedola zentengiso kwiindawo zokhenketho. I-CNN Task Group yasekwa kunye ne-UNWTO ngu-Anita Mendiratta, umcebisi ophezulu kuNobhala Jikelele. Injongo yeCNN Task Group kukuthengisa iintengiso. Eli qela lasekwa kwiminyaka eyadlulayo, ekuqaleni nge eTurboNews njengeqabane. kwaye kwaba njalo eTurboNews owabona ukungqubana komdla kwaye washiya iqela kunye ne-CNN, i-UNWTO, i-ICAO, kunye ne-IATA eseleyo.
UMarcelo Risi, ophethe unxibelelwano lwe-UNWTO, wala ukuthetha noSteinmetz. Wabonwa ebaleka le meko, esithi: “Juergen, ndixakekile.”
Oku akusiyo kuphela imeko ehlazo, kodwa kukwaphulwa okucacileyo kwenkululeko yeendaba kunye necala elicacileyo localucalulo.
USteinmetz akamelanga kuphela eTurboNews, kodwa ukwanguSihlalo we Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi, umbutho wezokhenketho wamazwe ngamazwe. USteinmetz ukwalilungu lebhodi yesigqeba seBhodi yezoKhenketho yase-Afrika.
Uzamile ukufikelela kumququzeleli wengqungquthela yabaphathiswa, iWorld Travel and Tourism Council (WTTC), kodwa amagosa asemnyango ala ukufumana igosa leWTTC ukuba lithethe naye, esithi abayazi ukuba iWTTC ithini. ngenxa.
Kwintlanganiso emfutshane ne-WTTC emva komsitho, iinkokeli zalo mbutho azizange zixelelwe ngento eyenzekileyo.
Jonga ividiyo ye-iPhone ebonisa imeko isenzeka: